Kedu ihe ntinye ihe? | induction igwe na-emepụta igwe | ihe ndozi oku
Usoro a na-ekpo ọkụ ọla edochaala usoro dị mkpa. Ntinye nke ntinye na-ebelata ike, na-emezi ductility ma na-ebelata nrụgide dị n'ime. Mgbakwunye ahụ zuru ezu bụ usoro ebe ejiri arụ ọrụ zuru ezu. Na onuete annealing (ọzọ ziri ezi maara dị ka onu mmiri normalizing), naanị okpomọkụ-emetụta mpaghara mepụtara ịgbado ọkụ usoro na-emeso.
Ntinye na ntinye na -eme ka ekpughere ngwa ngwa, nke a pụrụ ịtụkwasị obi na nke nwere akụkụ, njikwa njikwa ọnọdụ ziri ezi, yana ịdị nfe na ntanetị. Induction na-emeso onye ọ bụla na-arụ ọrụ iji kọwaa nkọwa, yana usoro nchịkwa na-aga n'ihu na-enyocha ma na-edekọ usoro niile.
A na-ejikarị ihe mmịnye ọkụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ọkpọkọ na ọkpọkọ. Ọ na-agbakwụnye waya, eriri igwe, mma mma na tubing ọla kọpa. N'ezie, ntinye bụ ihe dị mma maka ọrụ ọ bụla na-agbakwunye.
A na-ewu usoro anwepu DAWEI ọ bụla iji mejupụta ihe achọrọ. N'etiti usoro nke ọ bụla
DAWEI Induction Heating generator nke na-egosipụta ngwa ngwa akpaaka na-arụ ọrụ yana ike na-arụ ọrụ mgbe niile na ọkwa ike niile. Imirikiti usoro anyị nyefere na-ejikwa njikwa aka-wuru omenala na njikwa njikwa.
Categories FAQ Tags mgbakwunye, ogologo oge ịkpọchi, elu ugboro ugboro n'elu, ntinye ntinye, ntinye ntinye, Kedu ihe mmegharị na-emegharị?